I-MURAKA SAUNA HOUSE YABATHANDI BEMVELO
Kolu, Järva maakond, i-Estonia
Indawo yonke ibungazwe ngu-Merit
Indlu yethu ye-sauna ilungele umbhangqwana ofuna imvelo nempilo yezwe. Futhi indawo efanelekile yemindeni (imibhede eyengeziwe ingahlelwa). Iphawundi elikhulu ongabhukuda kulo kanye nezinto eziningi ezikhangayo zezingane ezifana nokushwiba, ibhokisi lesihlabathi, indlu yokudlala njll.
Indlu yethu ye-sauna ilungele abathandi bemvelo abathanda ukuhlala emaphandleni futhi bajabulele imvelo. Kungenzeka ukuhamba ngezinyawo uye ehlathini, ubhukude, uhambe ngebhayisikili. Ababungazi banobungane kakhulu futhi bayasebenzisana ngakho-ke kungenzeka noma yini ukuhlela.
Singabantu bezenhlalakahle kakhulu futhi singathanda ukuxhumana nezivakashi kakhulu Uma zikhetha kanjalo. Lapho-ke sikhetha ukujabulela ukuthula nokuthula nesikhathi sodwa sizogcina isikhala futhi sibavumele bajabulele impilo yezwe. Kulula ukungithola nge-Airbnb noma ngocingo noma ngomlayezo. Phendula ngokushesha.
Singabantu bezenhlalakahle kakhulu futhi singathanda ukuxhumana nezivakashi kakhulu Uma zikhetha kanjalo. Lapho-ke sikhetha ukujabulela ukuthula nokuthula nesikhathi sodwa sizogcin…
UMerit Ungumbungazi ovelele